3 सबै समय को कला प्रेमियों को लागी संदर्भ पुस्तकहरु वर्तमान साहित्य
Reference सन्दर्भ पुस्तकहरू सबै समयका कला प्रेमीहरूका लागि
तीन सन्दर्भ शीर्षक
आधुनिक, अमूर्त, क्लासिक, समकालीन, राष्ट्रिय, विदेशी ... कन्नोसेसरहरूको लागि, साधारण मानिसहरूका लागि, भक्तहरूको लागि वा केवल जिज्ञासुहरूको लागि। यी तीन पुस्तकहरु एक सन्दर्भ हो. किनभने कला पनि पढ्न सकिन्छ साथै प्रशंसा गर्न पनि सकिन्छ। यदि उनीहरूलाई कसरी बताउने, व्याख्या गर्ने, तर्क गर्ने वा दुवै मनोरञ्जनात्मक र अधिक युक्तिपूर्ण तरीकाले प्रस्तुत गर्ने तरिका पनि जान्दछन्; वा यदि तपाईं त्यो कलाकार विकास गर्न चाहनुहुन्छ जुन हामी सबै भित्र बोक्दछौं, न हिचकिचाउनुहोस्। एकचोटी हेर्नु.
1 तिमी के हेर्दै छौ? - Gompertz हुनेछ
2 कलाकारको तरिका - जुलिया क्यामरन
3 कला को इतिहास - EH Gombrich
4 किन उनीहरूसँग सम्पर्क राख्ने
तिमी के हेर्दै छौ? - Gompertz हुनेछ
मूल, अपमानजनक, पहुँचयोग्य र मनोरन्जनकारी गाइड बीबीसीका कला निर्देशक विल गोम्पर्टज, लन्डनमा टेट ग्यालेरीका पूर्व निर्देशक र आधुनिक कलाका लागि विश्वका एक अग्रणी विज्ञले हस्ताक्षर गरे।
उनको उद्देश्य: हामी सबैले आफैंलाई कहिलेकाँही सोधेका प्रश्नहरूको उत्तर दिन बीचमा कालो पट्टीको साथ खाली क्यानभासको अगाडि। र यो पहिलो खामबाट सुरू हुन्छ आफुलाई मन पराउने वा आफूलाई घृणा गर्ने तर्क जारी राख्न आधुनिक कला के हो उही जोशको साथ वा किन यो यति महँगो छ।
मोनेटको पानी लिलीहरू, भ्यान गोगको सूर्यफूलहरू, वारहोलको सूप क्यान वा डेमियन हिर्सको फर्मल्डिहाइड शार्कहरू ... कला को अन्तिम १ years० वर्ष को माध्यम बाट यात्रा यस पुस्तकले कथाहरू, उपाख्यानहरू र कार्यहरूको पछाडि व्यक्ति भन्छ। यो दुबै आम मानिस र सचेतका साथ साथै विश्वस्त र भावुकलाई लक्षित गर्दछ अचेतन वा अमूर्तको। कुनै पनि प्रश्नको यसको उत्तर छ।
गोम्पर्टज वर्णन गर्छन् किन पोलक वा काजान जीनियस थिए, कसरी मार्सेल डेकैम्पको युरिनलले कलाको इतिहास परिवर्तन गर्ने क्रममा वा किन हाम्रा बच्चाहरूले यो समान गर्न सक्दैनन्। म विशेष गरी सबैभन्दा पुरानोलाई अस्वीकार गर्न कटिबद्ध छु: मेरो and र year बर्षको भान्जीहरू मेरो आफ्नै विशेष जसपर जोन्स हुन्। तर यस मार्गनिर्देशनको साथ शायद लन्डनमा टेट मॉडर्नमा मेरो अर्को यात्रा अधिक फलदायी हुनेछ।
कलाकारको तरिका - जुलिया क्यामरन
यस पुस्तकले आधारभूत अवधारणा लिन्छ रचनात्मक अभिव्यक्ति हामीले जीवनमा गर्ने हरेक गतिविधिमा उपस्थित छ। जुलिया क्यामरन कसरी पुन: प्राप्ति गर्ने वा हामीलाई देखाउँदछ एक विस्तृत कार्यक्रम को माध्यम बाट सृजनात्मकता विकास गर्नुहोस् मानसिक अवरोधहरू, लत वा अन्य नकारात्मक शक्तिहरूमाथि विजय प्राप्त गर्नुहोस्। यी दिशानिर्देशहरूको पालना गर्दा, यो हाम्रो आफ्नै कलात्मक विश्वासको साथ लड्न वा प्रतिस्थापन गर्न सम्भव छ।
जुलिया क्यामरन (१ 1948 XNUMX) पक्कै जान्दछन् कि उनी के कुरा गरिरहेकी छिन्। उनको जीवन रक्सी, लागूऔषधको लागी उनको चिनारी हो र अन्य पदार्थहरु र मार्टिन Scorsese विवाह भएको दुई बर्षको लागि। उहाँलाई थाहा छ कसरी यसलाई एकसाथ फेरि राख्ने भनेर धन्यवाद र त्यो रचनात्मकता विकास गर्न।
कलाकारको पथ सबैभन्दा ठूलो बेस्टसेलर मध्ये एक हो बिषयको विषय र एक कलाकारलाई बाँच्न र अनुभूति गर्न को लागी एक गाइड र लगभग एक स्व-मद्दत पुस्तक दुबै मान्न सकिन्छ।
कला को इतिहास - EH Gombrich
यो सबैभन्दा प्रख्यात र लोकप्रिय कला पुस्तकहरू मध्ये एक हो र पचास बर्षको लागि सबै भन्दा राम्रो विक्रेता भएको छ।। यो हाल यसको १th औं संस्करणमा छ। सामान्यमा यसको सम्पूर्णतामा कलाको परिचयको रूपमा अतुलनीय। र यो हाम्रो समयको सबैभन्दा प्रयोगात्मक कलामा आदिम गुफा चित्रांकनबाट जान्छ।
अस्ट्रियाका प्रोफेसर अर्न्स्ट गोम्ब्रिक भियना र मा जन्म भएको थियो १ 1936 inXNUMX मा ग्रेट ब्रिटेनमा बसाई सरे, जहाँ उनका धेरैजसो जीवन लन्डन विश्वविद्यालयको वारबर्ग इन्स्टिच्यूटमा कार्यरत थिए। उनको योग्यता र असंख्य पुस्तक, लेख र निबन्धको प्रकाशनले उनलाई प्रतिष्ठा मात्र होइन तर सरको उपाधि सहित धेरै अन्तर्राष्ट्रिय सम्मानहरू पनि प्राप्त गर्‍यो। तर यो निस्सन्देह यो पुस्तक संसारभरि कला विद्यार्थीहरूलाई खुशी र शिक्षित गर्न जारी छ।
यसको स्पष्ट र सरल कथा सबै उमेर र सर्तहरूको पाठकहरूको लागि पहुँच योग्य छ। ज्ञान, ज्ञान, राम्रो संचार र कलाको लागि गहिरो प्रेमको सटीक मिश्रण उसको सफलताको कुञ्जी हो। त्यसैले यो कला को इतिहास सबै भन्दा अनुभवी र अन्निहितका लागि समान रूपमा संकेत गरिएको छ।
किन उनीहरूसँग सम्पर्क राख्ने
किनकि हामी सबैलाई कला मन पर्छ। केही बोस्कोको अगाडि घुँडा टेक्छन् र कोहीले क्लेमटलाई माया गर्छन्। केहि पूज्य रिबेरा र अरूले मार्क रोत्कोलाई मन पराउँछन्। किनभने त्यहाँ हामी मध्ये धेरै हौं र सबैको लागि त्यहाँ केहि छ। किनभने यो पढिसकिएको भन्दा बढी प्रशंसा गरिएको छ, तर तपाईं यसले पढ्न सक्नुहुन्छ यसले हामीलाई कस्तो महसुस गर्छ र अभिव्यक्त गर्दछ.
लेखको पूर्ण मार्ग: वर्तमान साहित्य » साहित्य » किताबहरु » Reference सन्दर्भ पुस्तकहरू सबै समयका कला प्रेमीहरूका लागि
निर्वासनमा लेखिएका books पुस्तकहरू